खुलामञ्चबाट विप्लवको चुनौती : एमसीसी पास गर्छाै भन्ने कसैले नसोच्नु ! « On Khabar
खुलामञ्चबाट विप्लवको चुनौती : एमसीसी पास गर्छाै भन्ने कसैले नसोच्नु !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ले अमेरिकी साहायता परियोजना एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताविरुद्ध भएको दावी गरेका छन्।
‘एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती लादिदै छ,’ राजधानीमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले भने,‘हामीमाथि प्रतिवन्ध लागेकै बेला हामीले त्यो सम्झौता पुरै पढ्यौं । एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सर्वभौमिकताको विरुद्धमा छ ।’सम्झौतामा एमसीसी नेपालको कानूनसँग बाँझिएमा एमसीसीमा लागू हुने उल्लेख भएको दावी गर्दै उनले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो लागिने लागेको बताए।‘यो सम्झौता कसको हितमा गरिदै छ ?,’ उनको भनाइ छ, ‘अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति यो लागू गरिदै छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको संरक्षणका लागि एमसीसी अघि सारिएको हो।
विप्लवले नेपालमा राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसी पास भएमा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुने बताएका छन् । एमसीसीविरुद्ध नेपाल कम्युनस्टि पार्टीले आज काठमाडौँको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको सभामा सम्बोधन गर्दै नेकपाका महासचिव विप्लवले एमसीसी नेपाली जनता र देशका विरुद्धमा रहेकाले यसको खारेजीका लागि सिङ्गो देश आन्दोलित बनेको बताए ।
विप्लवले भने, ‘सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरेर हामीले उक्त सहमति इमानदारीपूर्व पालना गर्योँ तर राज्यले उक्त सहमति इमानदारीपूर्वक पालना गरेको छैन । अहिलेसम्म हाम्रा साथीहरूका मुद्दाहरू खारेज गरिएको छैन । देशको भविष्य आँखामा सजाएर हिँडेका नेता–कार्यकर्ता र युवाहरूलाई सरकारले दमन गरेको छ । हाम्रो देशका नागरिकलाई जिउँदै महाकाली नदीमा बगाउने शासकहरूका विरुद्ध आन्दोलन गर्दा सरकारले हामीलाई जेलमा लगेर सडाउँछ भने हामी एउटा ठूलो आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नेछौँ ।’